Romana 16 - Ny Baiboly
3Veloma any amin'i Priska sy Akilasy mpiara-miasa amiko ao amin'i Jesoa-Kristy; 4nanao vy very hamonjy ny aiko izy mivady ireo, ka tsy izaho irery no misaotra azy, fa ny Eglizy rehetra any amin'ny jentily koa, 5ary veloma any amin'ny Eglizy rehetra izay ao an-tranony. Veloma any amin'i Epeneto malalako, izay santatr'i Asia ho an'ny Kristy. 6Veloma any amin'i Maria, izay niasa mafy ho anareo. 7Veloma any amin'i Androniky sy Joniasa havako sy niara-nifatotra tamiko, izay sady tsara laza amin'ny Apostoly no tao amin'ny Kristy talohako aza. 8Veloma any amin'i Anfiasa, malalako ao amin'ny Tompo. 9Veloma any amin'i Orbano, mpiara-miasa amintsika ao amin'ny Kristy, sy Stakisa malalako. 10Veloma any amin'i Apela, mpanompo mahatokin'ny Kristy. Veloma any amin'i Aristobola mianakavy. 11Veloma any amin'i Herodiòna havako. Veloma any amin'i Narsisy mianakavy, izay ao amin'ny Tompo. 12Veloma any amin'i Trifemo sy Trifaozy, izay miasa ao amin'ny Tompo. Veloma any amin'i Persida malala, izay miasa fatratra ao amin'ny Tompo. 13Veloma any amin'i Rofosa olo-malaza ao amin'ny Tompo, sy any amin-dreniny izay reniko koa. 14Veloma any amin'i Asinkrito, Felgòna, Hermesy, Patrobosa, Hermasy, mbamin'ny rahalahy ao aminy. 15Veloma any amin'i Filologo sy Jolia, ary Nerea mianadahy, sy Olimpia, mbamin'ny olo-masina rehetra ao aminy. 16Mifampiarahabà amin'ny fanorohana masina. Manao veloma anareo ny Egizin'ny Kristy rehetra.
17Mangataka aminareo aho, ry rahalahy, mba hitandrin-tena amin'ireo mahatonga fisarahana sy fanafintohinana, fa tsy manaraka ny fampianarana efa noraisinareo; halaviro ireny. 18Fa tsy mba ny Kristy no tompoin'ny olona toy ireny, fa ny kibony, ary teny malefaka sy manodòka no entiny mamitaka ny tsy ampy saina. 19Efa niely amin'ny olona rehetra ny lazan'ny fanekenareo izao, ka faly aminareo tokoa aho; fa hany iriko dia izao: mba ho hendry hianareo raha ny amin'ny tsara, fa tsy hahalala kosa raha ny amin'ny ratsy. 20Ny Andriamanitry ny fiadanana anie hanorotoro faingana ny an'i Satana eo ambanin'ny tongotrareo. Ary ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika.
21Manao veloma anareo i Timote, mpiara-miasa amiko, sy Losiosa ary Jasòna mbamin'i Sosipatera havako. 22Izaho Tersiosa, izay nanoratra ity taratasy ity koa, manao veloma anareo ao amin'ny Tompo. 23Manao veloma anareo i Gaïosa, ilay itoeranay, mbamin'ny Eglizy rehetra. Manao veloma anareo i Erasta, mpitahiry ny volam-panjakana eto an-tanàna, sy i Koartosa rahalahy. 24Ho aminareo rehetra anie ny fahasoavan'i Jesoa-Kristy Tompontsika. Amena.
25Ary ho an'ilay mahay mankahery anareo araka ny Evanjeliko, izay nitoriana an'i Jesoa-Kristy sy nanambarana ny zava-miafina tsy voalaza hatrizay hatrizay, 26(fa voaseho ankehitriny tamin'ny soratry ny mpaminany, araka ny didin'ny Andriamanitra mandrakizay, ka nampahafantarina ny firenena rehetra mba hanekeny ny finoana) 27dia ho an'Andriamanitra, ilay hany hendry anie, ny voninahitra mandrakizay mandrakizay, amin'ny alalan'i Jesoa-Kristy. Amena. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0075 seconds